Mandaitra ny Fampihomehezan’ny Mpanjakan’ny Hatsikana ao Libanona Izao Tontolo Izao Amin’ny Alalanà Hatsikana Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Mey 2017 9:06 GMT
Mahazo aina i Nemr, Libaney Amerikana mpanao hatsikana, na any Arabia Saodita na any Etazonia no manao fampisehoana. Sary: Maria Abou Nassar
Ity lahatsoratra nosoratan’i Carol Hills ity dia nivoaka voalohany tao amin’ny PRI.org tamin’ny 13 Aprily 2017. Naverina navoaka teto izy ity mba ho ampahan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny PRI sy ny Global Voices.
Torohevitra vitsivitsy avy aminà zanaka lahy Arabo. Raha mpanao hatsikana no asa tianao hatao rahatrizay, aza manantena ny dadanao ho faly be amin’izany.
Toy izao no namalian’ny rainy an'i Nemr Abou Nassar, ilay Libaney Amerikana: “Ay te ho lasa clown ialahy?” Tsia, hoy Nemr manazava, mpanao hatsikana ambony sehatra. Mbola sadaikatra ihany ny rainy. “Ay, ‘ndeha hitsangana ialahy dia anao clown!”
Dia mbola mitohy hatrany ny fanalàna. Nividy anjomara ny rain’i Nemr, ilay fametaka amin’ny bisikileta ireny, ary nandritra ny valo taona taorian’izay dia nampanenoiny io anjomara io isaky ny mitsidika azy ny zanany : “Ô ry reto a, tonga indray ilay clown.”
Avy eo niseho tanatin’ny pejy voalohan’ny Rolling Stone i Nemr ka niova tampoka teo ny fihetsiky ny rainy. “Ity ilay zanako mpanao hatsikana. Niteny azy foana aho hoe araho ny nofin’ialahy.” Saingy tsy Rolling Stone no tononiny fa “Throwing Stones” (Mitora-bato), amin'ilay fiteny Arabo mavesatra.
Ity ilay fonon'ny Rolling Stone tamin'ny Mey 2014 (Afovoany Atsinanana). Sary: Rolling Stone
Milaza i Nemr fa mpankafy be azy ny rainy, “toy ny fankafizan’ny ray Arabo ny zanany satria dia mifanohitra amin’ny kolontsaina Arabo izany mankahery zanaka izany. Zavatra iray tsy miova izany mba hitandroana ny fanetren-tenan'izy ireo”. Ny hany tsy mba ataon’ny rainy dia ny manompa. “Raha misy ilay vazivazy mampiomehy indrindra eto ambonin’ny tany ka misy olona iray manompa, dia mangina fotsiny izy. Tsy tiany izany.”
Fa ireny hanihany momba azy ireny? Milaza i Nemr fa miatoka fotsiny ny rainy, “rehefa mahazo vola ialahy dia izay”.
Niniana natao ity resaka momba ny ray Arabo ity. Miaka-tsehatra amin’ny teny Anglisy manerana ny tontolo Arabo sy Silamo i Nemr ary amin’izao dia any Amerika Avaratra. Manao fitetezam-paritra eran-tany izy amin'izao, n’aiza n’aiza avy any Oklahoma ka hatrany Arabia Saodita. “Tsy dia mila manana fiaviana manokana loatra ianao vao hahatsapa izany ray manana fanantenana ambony ho an’ny zanany izany.”
Mitaratra ny zavatra niainany manokana ny fanatraran'i Nemr izao tontolo izao. Teraka tany Libanona tamin’ny 1983 izy ary nifindra tany San Diego, Kalifornia, ny fianakaviany tamin’izy 2 taona, nandritra ny ady an-trano lava tao amin’ny fireneny. Kanefa sivy taona monja taorian’izay ihany dia niverina tany Beirut ry zareo. Hitan’ny rainy fa mampihorohoro loatra ireo olana ao Amerika tahaka ny rongony sy ny fahaverezan-jaza, ka hoy izy amin'ny zanany lahy: “Any Beirut, ny hany mba loza dia ny ady. Afaka itsoahantsika sy iafenana izany.”
Mino ny fahefan’ny fampihomehezana ampiray ny olona i Nemr. “Ankehitriny, miady izao tontolo izao, tsy amin’ny alàlan'ny tafika fa amin’ny alàlan'ny firehankevitra, ary rehefa potehinao ny rindrina noforonina manelanelana ny Silamo, ny Kristiana sy ny Jiosy, amin’ny fametrahana azy ireo anaty efitra iray iraisana, ary tsy miresaka momba ny finoana ianao fa mombanà zavatra iarahan’ny besinimaro mihomehy, ka raha misy olona mitetika ny hitsofoka amin’ireo fizarana ireo amin'ny manaraka, dia tsy hisy intsony izy ireo.”
Sary: Maria Abou Nassar
Ary mety hahagaga Amerikana maro ity: raha ny marina dia manana fahazarana manivan-tena i Nemr rehefa miaka-tsehatra any Etazonia.
“Eto, misy fofompofona fahitsiana ara-pôlitika amin’izao fotoana izao eo amin'ny lafiny fampihomehezana, izay mampihorohoro, raha ho ahy manokana. Tahaky ny mangeja ny fahalalahanao miteny izany, izay hafahafa, raha amin’ny hetsika kanto tokony ho malalaka indrindra, dia ny fitsanganana sy firesahana mombanà hevitra iray.”
Any Libanona, afaka milaza ny zavatra rehetra izy. Nefa rehefa miaka-tsehatra any Etazonia kosa, mila mitandrina, na manome fanazavana betsaka kokoa ny tenany. Toy ilay hanihaniny momba ny ISIS.
“Hanihany adaladala momba ny maha-Arabo an’i Bruno Mars [Amerikana mpihira] ilay izy, satria tsy misy dikany aminao ny hirany raha tsy Arabo ianao.” Hirain’i Nemr ny andininy vitsivitsy anatin'ilay hira malazan’i Bruno Mars, “Grenade“. “I’d catch a grenade for you. Throw my head on a blade for you.” (Hisambotra grenady ho anao aho. Hanipy ny lohako any aminà antsy ho anao aho.) Amin'i Nemr, mazava be ny fifandraisan’izany amin’ny ISIS: “Aminà karazanà fotoana manahoana moa ianao no mampiaraka amin’ny sipanao eny amin’ny arabe ka misy manipy grenady any aminao, ka afahanao manararaotra misambotra ilay izy mba ho lasa mpamonjy.”
Ilay tohiny mampihomehy: Raha tsy hoe avy amin’ny ISIS ny olon-tianao.
Milaza i Nemr fa somary mikentrona kely ireo Amerikana mpijery ary mietsiketsika toa tsy mahazo aina amin’ny sezan’izy ireo. “Tonga tao an-tsaiko ny eritreritra fa hiteny ireo Amerikana hoe ‘Aaa, tsy mety izany’, noho ny fisian'ireo maty. Hany ka tsy maintsy manazava aho fa any Afovoany Atsinanana, raha tsy mivazivazy isika rehefa misy maty, dia tsy hivazivazy mihitsy izany. Satria misy maty foana. Tany Afovoany Atsinanana aho mety nahatafavoaka tsara izany hanihany izany.”
12 ora izayIsraely